Apple ma ilaawin: waxay u bilaabeysaa macruufka 9.3.6 iyo 10.3.4 iPhone iyo iPad duug ah | Wararka IPhone
louis padilla | | macruufka 10, macruufka 9
Apple ma ilaawdo aaladihi hore iyo qaladaadka suurtagalka ah ee laga dhex helay, xitaa hadii sanado laga soo gudbay oo la joojinayo iyo xitaa kaalmada farsamada. Xaqiiqooyinkiisa ayaa cadeeya, maantana waa cadeyntiisa: waxay hada bilowday ISO 9.3.6 iyo 10.3.4 hagaajinta dhibaatada GPS ee moodooyinka duugga ah ee iPhone iyo iPad.
Cusboonaysiinta ayaa timid isla maalinta iOS 12.4 la sii daayay, dhammaan qalabka wali ku dhex jira cusbooneysiinta rasmiga ah ee Apple. Haddii aad haysatid Ipad Mini Mini ama iPad 2 ah oo ku kaydsan khaanad, ama xitaa waxaad wali u isticmaashaa maalin kasta, waa waqtigii aad la xiriiri lahayd kombuyuutarkaaga si aad u cusbooneysiiso. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta hoose.
Cusboonaysiinta iOS 9.3.6 waa la heli karaa kaliya loogu talagalay iPad-yada leh taleefanka gacanta (3G) ee noocyada iPad 2 iyo 3, marka lagu daro iPad Mini. Cusboonaysiinta iOS 10.3.4 ayaa loo heli karaa iPhone 4 iyo iPad 4 oo leh isku xirnaan gacmeed. Tani waa sababta oo ah cusbooneysiintani waxay mas'uul ka yihiin xallinta dhibaatada hawlgalka GPS, iyo iPad kaliya WiFi ma laha GPS, markaa way ka baxeen cusbooneysiintan.
Kuwa idinka mid ah ee haysta mid ka mid ah aaladahaas ayaa ku xiri kara kombuyuutarkaaga adoo isticmaalaya fiilada USB-ga, cusbooneysiin kara iTunes, ama isticmaali kara cusbooneysiinta OTA, isku xirka shabakadda WiFi iyo marin u helka nidaamka. Apple waxay ku talineysaa in dhammaan aaladaha ay taageerayaan cusboonaysiiyaan noocyadan cusub. IOS 9.3.5 waxaa la sii daayay seddex sano ka hor, macruufka 10.3.3 laba sano ka hor. Marna kama habsaan in la saxo cillad la helay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Apple ma iloobo: waxay sii deysaa macruufka 9.3.6 iyo 10.3.4 ee gaboobay iPhone iyo iPad
Wax aan cusbooneysiin karo ama Facebook.
iPad madadaalo, dhib badan. 9.3.6 xanuun Iima aqbaleyso inaan cusbooneysiiyo 10 ama wax ka badan waana dalbanayaa.
Ku jawaab Delmy
Sharafta Bilbao dijo
Fiid wanaagsan, waxaan haystaa Ipad 9.3.6 IOS ah waxaana jira astaamo ama casriyeyn aanan sameyn karin. Codsiga aan ka helay BBVA wuu joojiyay shaqadii. Waan tirtiray oo waxaan isku dayay inaan dib u rakibo, laakiin waan kari waayey. Waxay i weydiineysaa inaan u cusbooneysiiyo iOS 10.3, laakiin iPad-keygu iima oggola cusbooneysiin dheeri ah. Maxaan sameyn karaa
Jawaab Gloria Bilbao
Sideen ugu cusbooneysiiyaa iPad-kayga hore iOS 10.3.3 ilaa iOS 11.0.
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga sida faallooyinkii hore, fiiro gaar ah u leh dhibaatooyinka yar ee isticmaala, ma aqaano waxa aan ku sameeyo suufkayga 9.3.6 (13G37, maadaama aanan wax cusbooneysiin ah sameyn karin.
CHEMA Herrezuelo dijo
Waxaan hayaa ipad leh nooca 9.3.6, sidee ayaan u cusbooneysiin karaa?
Jawaab ku bixi CHEMA Herrezuelo
Haddii aadan helin nooc kale, waa midka ugu dambeeya ee taageera
Waxaan hayaa IOS 9.3.5, sidee loogu cusbooneysiiyaa mid sare?
Ku jawaab Joserra
Waxaan hayaa ipad 2 oo leh 3g iyo nooca 9.3.5 oo ITUNES ma cusbooneysiinayso
Ku jawaab Manuel Gutierrez
Taasi run maahan, waxaan haystaa macruufka 9.3.5 waqti dheer kahor mana jiro wax cusboonaysiin ah oo uqalma, taas oo ah, waxaan hayaa haash
"Ha iloobin"?! ... gabal gabal qorshaysan! maalmahan waxaa suurta gal ahayd in barnaamij kasta laga adeegsado ipad 2 dhibaato la'aan, laakiin dowladaha musuqmaasuqa ah ayaa u ogolaanaya shirkadahaan qaawan ee ka faa'iideysanaya inay baabi'iyaan meeraha kaliya waxay ka fikiraan $ oo waxay sii wadaan iibinta haa, aalado aad u qurux badan oo aad u wanaagsan qiimahooduna aad u sarreeyo, marka laga reebo wax walba waa laga xadidaa, xitaa Linux waxay u socon kartaa si layaableh, hada waxaan ku jiraa macbook pro laga soo bilaabo 2010 waxayna leedahay Linux, waxay ka shaqeysaa si ka fiican sida loo yaqaan ios lafteeda wax dhib ahna kuma qabo "cusbooneysiinta", oo ku filan si aan ula qabsado nidaamka macaamiisha / muuqaalka, aan ka fikirno mustaqbalka oo aan taxaddar weyn siino si aan u yareyno raadkeenna inta aan ku dhex jirno noloshan. Apple ma fahmi doono haddii dadka isticmaala aysan u dirin cadaabta!
Jawaab Héctor Manuel Pérez Gómez
Si aad ugu faraxsanaato Linux-kaaga cajiibka ah ee ku jira MacBook, waxaad umuuqataa mid quruxsan oo xanaaqsan.
Sida loo wadaago fayl ka socda iCloud Drive-ka iOS 13 ama iPadOS
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 12.4 ee iPhone, iPad iyo HomePod